Cuntooyinka cuntada ee loo yaqaan '3' oo loogu talagalay cuntooyinka kaloriyada ee hooseeya - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » rasiidhada »Cuntooyinka cuntada ee loo yaqaan '3' oo loogu talagalay cuntooyinka kaloriyada ee hooseeya - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Cunista cunto caafimaad leh, kaloriin hooseeya waa mid ka mid ah istiraatiijiyadda qof walba uu raaci karo si loo ilaaliyo culeys caafimaad leh. In kasta oo dadka qaarkiis u maleynayaan inay tahay inaan ka boodno cuntada fiidkii si "loo keydiyo kalooriga", run ahaantii waxaa fiican in aan la iloobin cashada.
Ma jeclaan lahayd inaad barato sida loo kariyo cuntooyinkaan? Soo hel xulashooyinka cashada kalori ee hooseeya ee 3.
Maxay muhiim u tahay casho?
Ka soo horjeedda waxa dad badani qabaan, Iska dheelitirka cuntada fiidkii ma ahan hab caafimaad qab u leh miisaanka. Runtii, marka loo eego xogta cilmi baaris lagu daabacay Faallooyinka Xasaasiga ah ee Sayniska Cuntada iyo Nafaqada, ma jiraan wax cadeynaya cashadaas qadadawaa obeysité.
Si kastaba ha noqotee, waa la xaqiijiyay taas cunista cuntooyinka kalooriga badan leh ka hor intaadan sariirta aadin waxay saameyn ku yeelan kartaa isu-imaatinka duxda. Natiijo ahaan, waqti ka dib, tani waxay keenaysaa culays xad dhaaf ah iyo cayil. Sidaa darteed waa muhiim in la barto sida loo helo cunnooyin fudud oo aan lahayn kaloori xad dhaaf ah.
Sidan, Jidhku wuxuu helaa qadarka lagama maarmaanka ah ee nafaqooyinka si uu u guto howlaheeda inta lagu jiro xilliga nasashada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u maareynaa si ka fiican xakamee rabitaanka sidaa awgeedna laga fogaado cunnada badan maalinta ku xigta.
Sidoo kale soo celi: Cashooyinka fudud inay lumiyaan miisaan adigoon gaajoon
Raacista loogu talagalay cuntooyinka kaloriin ee hooseeya
Si aan ugu raaxaysanno faa'iidooyinka cunnada caafimaadka leh, waxaan ku siinnaa cuntooyinka 3 ee loogu talagalay cuntooyinka kalori ee hooseeya. Waxyaabaha isku dhafan ayaa kuu oggolaanaya inaad dhadhamiso suxuunta dhadhanka ah iyada oo aan laga baqin inaad miisaan kordho. Ku raaxayso iyada oo aan qoomamo la'aan!
1. Basbaas waxaa ku buuxsamay tuna
Basbaasku waa khudradda lagu garto waxyaabaha ay ka kooban tahay antioxidants. Xaaladdan oo kale, waxaan soo jeedineynaa inaan ku buuxinno kalluunka tuna si aan u helno cunno ay ku badan yihiin borotiinno iyo omega 3. Si ka sii wanaagsan, waxay bixisaa oo keliya qiyaas ahaan kalooriyaasha 253 halkii qaadasho.
Basbaaska cas (149 g)
Xashiishka dabiiciga ee qasacadaysan (85 g)
Basasha (100 g)
Cusbo iyo basbaas (oo loo eegayo dhadhanka)
Cheese mozzarella khafiif ah (20 g)
Si aad u bilowdo, si fiican u dhaq basbaaska casaanka ka dibna kululee foornada ilaa "180 ° C", oo leh kuleylka weelka.
Mar alla markay kululaato, basbaas saar saxan oo u oggolow inuu ku kari ilaa qiyaastii 45 daqiiqo.
Dhanka kale, diyaarso walxaha ka hadha. Ku bilow adoo ku googooyay basasha googooyaa oo ku dar toonta iyo milix yar yar iyo basbaas.
Markuu basbaaska diyaar yahay, ha u qaboobo in yar ka dibna ka saar maqaarka madow.
Ka dib gooyaa basbaaska qeybtii, ka saar abuurka gudaha oo ku buuxi isku dar ah kalluunka tuna iyo basasha.
Ugu dambeyntii, ku saydh wax yar oo mozzarella ah oo dib ugu celi mashiinka foornada daqiiqadaha 2 ama 3.
2. Baastada ay kujirto jiis iyo khudradda
Ayaa ku yiri ma awoodi kartid cun baastada casho? Waxa ugu muhiimsan waa in lagu daro iyaga oo ka kooban kaloriinooyin hooseeya si uusan uga badnaan waxa lagu taliyay ee maalinlaha ah. Haddii aad hiwaayad ka tahay saxankani, cuntadaani waa adiga. Waxay bixisaa oo keliya kalooriyada 281.
Baastada (150 g)
4 miisaska saliidda sayniska (60 ml)
Cusbo (haddii loo baahdo)
Dufan (100 g)
Tamaandho (20 g)
Xarig toon ah
2 miisas khudrad cad oo khamri ah (30 ml)
Parmesan farmaajo (20 g)
Marka hore, baastada ku kari biyo karkaraya dhowr qaado oo saliid saytuun ah iyo cusbo.
Markey diyaar noqdaan, daadi oo keydi.
Dhanka kale, skillet, kuleylka harsan saliida saytuunka ah oo kari dhir udgoon ilaa jilicsan.
Ka dib ku dar yaanyo aad jarjartey, toon ah iyo toon ah iyo waxoogaa yar oo khal cad oo khamri ah.
Markay diyaar garowdani diyaariso, waxaad ku qastaa baastada oo waxaad kudartaa wax kariskan ah wax yar oo jiis ah Parmesan.
Sidoo kale soo celi: Saladhka macaan ee 3 oo leh quinoa
3. Digaagada leh digaagga iyo khudradda
Waxaa muhiim ah in la ogaado in digaagga iyo canjeelada khudradda ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee cuntada loo cunayo fiidnimada bixi kaliya oo ku saabsan 243 calories. Dhanka kale, waa cunno ay ka kooban yihiin borotiinno, fiitamiinno, macdano iyo nafaqooyin kale oo muhiim ah kuwaas oo gacan ka geysta fayo qabkeenna.
Corn tortilla (29 g)
Digaag (50 g)
Basasha (50 g)
Basbaaska cagaaran (100 g)
Basbaaska cas (100 g)
Si aad u bilowdo, basbaaska u kala jar qaybo dheer.
Sidoo kale yaree basasha ee julienne.
Ka dib kuleylka digsiga waxoogaa yarsaliida saytuunka oo isku shiil khudradda. Dilkii loogu talagalay daqiiqadihii 5.
Dhanka kale, digaagga u kala jeex oo ku dar digsiga khudradda inteeda kale.
U qarxi waxkasta daqiiqado kale oo ah 5, ama ilaa ay ka gaarayaan qoraalka la doonayo.
Kudar milix iyo basbaas ka dibna ka qaad dabka.
Ugu dambeyntii, kuleyl miil nadiif ah kari oo ku kari miraha galeyda.
Marka kulul (qiyaastii daqiiqadaha 2 ama 3), qurx khudradda iyo digaagga.
Kadib ku duub tortilla kasta oo ku raaxeyso!
Miyaad ka mid tahay kuwa ka boodaaya cuntada fiidkii iyagoo ka cabsanaya inuu miisaankoodu kordho? Sida aad arki karto Thanks to cuntooyinkaan ee qadooyinka kaloriinka hooseeya, waxaad awoodi doontaa inaad dhadhamiso cuntadan iyada oo aan laga qoomameyn. Ha sugin wax ka badan inaad ku tijaabiso guriga!
Saddex nooc oo khudradda xilliyeedka ah
Marka laga hadlayo tayada nafaqada, waxaa muhiim ah in wax la cuno marka loo eego xilliyada. Soo hel cuntada sida ku saleysan khudaarta xilliyeed halkan! Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/3-recettes-pour-des-diners-faibles-en-calories/